BORIC ACID FINANKA WAJIGA: WAXAAN KU GUBI KARAA XAL 3% AH, WAA MAXAY TILMAAMAHA ISTICMAALKA, IYO SAMAYNTA BACRIMINTA SALICYLIC IYO CHLORAMPHENICOL? - WIXII MARTIDA
Boric (orthoboric) acid waxaa loo isticmaalaa daaweynta finanka sida antiseptic. Waxay ka mid tahay asiidhyada daciifka ah, ma laha dhadhan iyo urin, waa mid liitaa biyo lagu fili karo. Waan ognahay in ay tahay qamriga boric - 70% ethanol xal oo leh boris acid 0.5-3%.
Daaweeynta finanka iyo finanku, ma aha oo keliya isticmaalka khamriga loo isticmaalo oo keliya, laakiin sidoo kale boomaatada, iyo sidoo kale "kalahadalay" kala duwan - joojin, oo aan ku jirin kaliya boric acid, laakiin sidoo kale daroogooyinka kale ee daaweeya maqaarka.
Tixgeli haddii ay caawimaan ama awoodaan waxyeello, iyo sida loo isticmaalo qalabka si sax ah. Iyo sidoo kale qiimaha iyo goobaha iibka.
Miyuu suurtogal yahay in la gubo finan leh qalabkan?
Haddii yar yahiin, mindhicirro cusub oo leh madax cadaan cad oo muuqaal ah ayaa muuqda, wejiga wuxuu noqonayaa mid waxtar leh. Acid waxay dili doontaa bakteeriyada, waxay yareyneysaa bararka iyo maqaarka qalalan. Laakiin farsamadani waa in la isticmaalo oo kaliya foorarro cusub. Haddii uu jiro malax badan, ka dibna gubi waa wax aan faa'iido lahayn. Waxaa lagama maarmaan ah in la kala saaro waxa ku jira mindhicirta oo kaliya markaasna waxa la cabbira khamriga.
More boric acid ma caawineyso madow, xirmo dufan iyo dufan. Waxay kordhin doontaa oo nadiifinaysaa indhaha, laakiin mar kale waxay ku xiri doonaan wasakh iyo dufan maqaarka ah.
Waa muhiim! Finanku waxay noqon karaan calaamad muujinaysa jirro halis ah, oo kaliya maaha cillad qurxiyo. Sidaa daraadeed, khamriga boricida kali ma daaweyn karo finanka iyo finanka.
Boric acid waxay leedahay saameyn antiseptic ah, oo dila dhirta iyo bakteeriyada, ka hortagga dhalmada. Ma lumiso waxtarkeeda isticmaalka badanaa, sida daawooyinka kale ee ku salaysan antibiotics.
Waxtarnimada tani iyo antiseptics kale
Marka lagu daro boric acid, macnaheedu waa in lagu daaweeyo maqaarka. Kuwa ugu caansan waa chloramphenicol iyo salicylic acid. Laga soo bilaabo isku-dar ah saddexda diyaargarow, ganaaxyada waxaa loo diyaariyey daawaynta maqaarka.
Nooca maqaarka Muddada isticmaalka Waxqabadka Nooca
Salicylic acid Kaliya miisaan, isku dhafan Maalin, 2-3 toddobaad
Kala saaraa barar iyo iftiin.
Meelaha laga saaro finan yaryar.
Boric acid Dhammaanba Maalin, 2-3 toddobaad
Wuxuu aaminsan yahay caabuq.
Levomycetin Dhammaanba 7-10 maalmood
Kala saaro finanka.
Salicylic acid waa mid xoog badan, laakiin maaha mid ku habboon maqaarka xasaasiga ah. Levomycetin looma isticmaali karo waqti dheer. Boric acid waa lacag la'aan kuwan faa'iido darradaas.
Boric acid waa ka mamnuuc in ay u isticmaasho haweenka uurka leh iyo kuwa nuujinaya, dhallaanka back in 1987. Isu ururinta unugyada, daroogada ayaa si tartiib ah uga soo baxaysa jidhka waxana ay keeni kartaa sunta.
Dabcan, qof weyn oo caafimaad qaba, isticmaal macquul ah oo banaanka ah ee daroogadaasi ma waxyeelayn doono. Waxa kaliya oo muhiim ah in aan loo oggolaan in xal loo helo xuubka xuubka indhaha iyo afka, maaha in lagu daaweeyo jir ballaaran oo jidhka ah, si loogu dabaqo koorsooyinka gaaban iyo si adag sida waafaqsan tilmaamaha. Adiga ma isticmaali kartid boric acid, kuwa qaba cilladda kelyaha oo daciif ah.
La ogol yahay in loo adeegsado carruurta ka weyn hal sano., laakiin si qiyaasta loo qaato, iyada oo aan loo eegin muddada isticmaalka boomaatada ama xalka, ma ahayn wax ka badan 2 garaam.
Kalkaalisadu looma isticmaali karo maqaarka naaska. Hooyooyinka suga hooyada - hubaal waxay u baahan yihiin inay joojiyaan daaweyntaan, iyo haddii ay jiraan dhibaatooyin maqaarka ah, u fiirso daawooyin badbaado leh. Liiska daawooyinka kale ee finanku waa la bixiyaa dhammaadka qodobkan.
Meeqa iyo xagee lagu iibsanayaa?
Saliida, xalinta khamriga iyo "wada hadal" waxaa lagu gadaa oo keliya farmashiyada. Haddii iyo haddii labadii waxyaabood ee ugu horeysay lagu iibiyo bilaa warqad dhakhtar la'aan ah, ganaaxa, sida caadiga ah, waxaa loo diyaariyaa si gooni ah sida ku xusan warqadda dhakhtar ee maqaarka. Daawooyinka noocan ah waxaa laga dalban karaa oo keliya farmasiyada gobolka.
Waa kuwan qiimaha hadda ee farmashiyeyaasha Moscow macaashka loogu talagalay oo qayb ka mid ah ay jirto boric acid.
Celceliska kharashka 3% aalkolada qamriga 25 ml ee u dhaxaysa 9 ilaa 36 r. iyada oo ku xidhan soo saaraha iyo calaamadda. Miisaan la mid ah oo ah bacriminta borotiinka 5% kharashka 30 - 50 p.
Qiimaha caanaha finanku waxay ku xiran tahay qiimaha daawooyinka kale ee lagu daray. Waa in lagu dhajiyo maskaxda in farmashiistaan ​​qalabka si gaar ah kuu soo saaro. Sidaa darteed, way ka qaalisan yihiin, laakiin qiimo jaban.
Ka joojinta diyaarinta ee trichopol waxay ku kici doontaa 180 p.
Ku dhalashada boodhka ("Resorcin") - 350 p.
Caanaha Vidal - 350 p.
Digniin! Kalsooni-qaadayaasha "self-cooked" ayaa ka jaban 50-60%.
Ballanqaadka maqaarka quruxda badan iyo caafimaadkiisa waa isticmaalka saxda ah ee daawada. Sababtoo ah inta jeer iyo inta badan daawada loo isticmaalo waxay ku xiran tahay natiijada kama dambaysta ah. Dhammaan alaabooyinka waxaa loo isticmaalaa in la nadiifiyo, maqaarka si fiican loo nadiifiyey.
Ka joojinta ma aha oo keliya daaweynta dhibaatooyinka maqaarka, laakiin sidoo kale waxay u dhaqmaan sidii prophylactic si looga hortago muuqaalka finan cusub.
Koorso: 2 toddobaad.
Imisa jeer maalintii: 1 jeer fiidkii.
Ruxin daroogada kuna dabool dhawr dhibcood oo ah suufka.
Ciriiri wejiga, marka laga reebo aagga hareeraha indhaha iyo dibnaha, si sahlan u daadinta alaabta maqaarka.
Iska daaya wajiga illaa biyaha ku xiga.
Inta lagu jiro daweynta, maqaarka wuxuu noqdaa mid xasaasi u ah iftiinka ultraviolet.
Qaadashada iyo codsiyada waxay qaataan 3% alkol boric.
Waa ku filan tahay in maqaarka la tirtiro hal mar maalintii si xaaladeeda ay u fiicnaado.
Koorso: 3-5 maalmood.
Haddii aad maqashid maqaarka ka badan hal jeer, maqaarka ayaa soo baxaya.
Bariisku ma aha mid caan ah sida xalka, laakiin waxa uu leeyahay mudnaanta.
Sidaas awgeed, waxaa la isticmaali karaa dhibic, taas oo ah mid aad u sahlan. Iyo sidoo kale ku habboon maqaarka iyo maqaarka qallalan.
Waxa ugu muhiimsan waa in si taxadar leh loo diyaariyo maqaarka ka hor inta aan la isticmaalin boomaatada.
Koorso: 3 toddobaad.
Imisa jeer maalintii: ku dabool maqaarka si fiican u nadiifsan 1 jeer maalintii.
Caadi ahaan asbuuc ka dib waxaad arki kartaa natiijada. Oo weliba waxaad u baahan tahay inaad tixgeliso in, iyadoon loo eegin noocyada daroogada, marka ugu horeysa tirada nabarada maqaarka ee sii kordhaya. Kadibna maqaarka waa la cusbooneysiiyaa, la nadiifiyaa, iyo dhamaadka koorsada waxaa mar hore nadiif ah oo caafimaad leh.
Cawaaqib xun ayaa dhacaya marka:
Daawo xad dhaaf ah. Isticmaalka badanaa wuxuu keenaa lallabbo, madax xanuun, maqaarka maqaarka. Baahida degdeg ah ee aad u tagto isbitaalka.
Dareenka maqaarka. Waxay ka kooban tahay gaduud xoogan oo maqaarka, barar iyo cuncun. Waxaa lagama maarmaan ah in la dhaqo qalabka oo ka tago isticmaalka.
Badanaa, arjiga koowaad waxaa jira dareen gubasho ah, taas oo markaa ka dib.
Kahortagga finanka soo noqnoqda ee wejiga
Si aad u xaliso natiijada aad u baahan tahay:
Isku dheellitir cuntadaada iyo hoggaaminta hab nololeed sax ah.
Way fiicantahay in laga takhaluso qurxinta makhaayadaha, buraashka iyo buraashka, oo aad u tagto macnaheedu aan ahayn majaajilada.
Mar mar, 2-3 bilood kadib dhammaadka koorsada daaweynta finanka, waxaad ku noqon kartaa daaweynta la xaqiijiyay, boric acid.
Daroogooyinka ficilka la midka ah
Ka soo horjeedka finan, waxaad isticmaali kartaa mukhaadaraadka sida:
Badaashka dib u noqoshada.
Waxay tirtiri doontaa.
Oo iyaga u diyaari daawooyinka dadweynaha - muraayadaha dhoobada, badyaha iyo khamiirka, maydhashada leh decoctions ee geedo.
Boric acid ayaa nafteeda ka dhigtay qalab aan qaali ahayn oo wax ku ool ah. Iyadoo loo adeegsanayo ujeedada loogu talagalay wakhti gaaban si ay uga takhalusaan finanka iyo finanka. Waxaa loo isticmaali karaa oo kali ah oo lagu daraa daawooyinka kale si loo daaweeyo maqaarka. Si kastaba ha noqotee, sababtoo ah sunta suntan waa in si taxadar leh loo adeegsadaa si loola socdo caafimaadkooda.